Gbanwee iPhone gi n'ime Egwuregwu Nwa nke ikpe Wanle | Akụkọ akụrụngwa
Wanle na-ebupụta ikpe nke na-agbanwe iPhone gị ka ọ bụrụ ezigbo Nwa nwoke nwoke
Eder Esteban | | Ngwa, Ndi Consolas
Ọtụtụ ndị ọrụ anọwo na-achọ ụzọ isi gbanwee ekwentị ha n'ime ezigbo Game Boy. Nke a abụghị echiche ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ugbu a, otu ụlọ ọrụ juru ya anya. Otu ụlọ ọrụ akpọrọ Wanle amalitela ikpe iphone. N'ihi ya, ihe niile nkịtị. Mana ekele maka ikpe a, ekwentị na-arụ ọrụ Game Boy.
Nostalgia bu ihe di nkpa. Ebe ọ bụ na anyị na-ahụ otú ochie consoles laghachiri na ejiji. Ya mere Nintendo njikwa agaghị agbanahụ omume a. Ugbu a, ị nwere ike ịgbanwe iPhone gị n'ime otu ekele maka ikpe Wanle a.
Naanị ị ga-etinye ikpe ahụ na azụ iPhone. Egwuregwu Nwa nwoke a nwere ihuenyo LCD nke ya, bọtịnụ A na B mara mma, yana bọtịnụ on na gbanyụọ. Na mgbakwunye, o nwere ike nke aka ya. Ka ọ were ọ gaghị eji batrị ama n'oge ọ bụla.
Ihe njikwa a na-eji egwuregwu 10 arụnyere. Ha niile bụ egwuregwu ndị kpochapụrụ mara mma nke ochie, nke anyị na-achọta Tetris na agwọ. Ya mere, ọ bụ ezigbo nhọrọ iji tụlee maka ọtụtụ nostalgic. Ọzọkwa, dakọtara na ụdị iPhone niile sitere na iPhone 6.
Ọ gaghị egbochi igwefoto, ihe mmetụta, ma ọ bụ igwe okwu nke ekwentị ọ bụla. N'ihi ya, i nwere ike iji gị iPhone kwesịrị. Ma na azụ ị ga-enwe Game Boy nke ị nwere ike igwu egwu. Ihe a o nwere batrị nke ya. Yabụ ozugbo ọ gwụrụ, ị ga-akwụ ụgwọ ya maka ya.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ echiche mbụ nke na-ekwe nkwa inye ọtụtụ ihe iji kwuo banyere ya. A tọhapụrụ ikpe Game Boy a nwa oge na ọnụahịa nke $ 25. Ọ bụ ezie na ezigbo ọnụahịa ya bụ dollar 80. Ọ dị ka nkwalite ahụ ka dị ike, yabụ ị nwere ike ịzụta ya na ụlọ ọrụ weebụsaịtị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Wanle na-ebupụta ikpe nke na-agbanwe iPhone gị ka ọ bụrụ ezigbo Nwa nwoke nwoke
Nke a bụ otú igwe foto na-agbanwe agbanwe nke Galaxy S9 na S9 + si arụ ọrụ